Posted on 05 / 30 / 2019 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
Maanta, dad badan oo jidh-dhiseyaashu waxay doorbidaan in ay noqdaan steroids si ay kor ugu qaadaan muruqooda. Nandrolone Decanoate, oo loo yaqaan DECA, oo lagu iibiyey magaca DECA-Durabolin, waa mid ka mid ah qalabka awoodda badan ee siinaya natiijooyin fantastik ah markii uu ku habboon yahay. Haddii aad ku cusub tahay warshadaha, waxaa laga yaabaa inaad ka fekerto waxa ay tahay Deca Durabolin iyo waxa uu kuu qaban karo. Waa kuwan qaar ka mid ah qaababka Nandrolone Decanoate (DECA) oo ka dhigaya kuwo ka baxsan kuwa kale.
Nandrolone Decanoate (DECA) waa steroid wax tartiib tartiib ah, taasina waxay ka dhigeysaa mid caan ah. Waa maxay faa'iido u lahaanshaha isticmaalka steroid slower? Mudada dheer ee nolosha nuska, muddada dheer waxay qaadan doontaa steroid si ay jirka uga tagto. Sidoo kale, tani macnaheedu waa in qiyaasta Nandrolone Decanoate aysan ahayn inay noqoto mid joogto ah. Adiga oo kaliya waa inaad qaadataa duritaan saddex toddobaad ka dib, ka duwan kuwa kale oo aad u baahan tahay inaad hesho jajabka todobaadkii.
Ma jiro xanuun wadajir ah oo leh isticmaalka Nandrolone Decanoate tan iyo markii ay xaqiijiso in ay mar walba caafimaad qabaan.
Tallaabada 1: Miisaanka Nandrolone Decanoate budada u miisaamee xayndaab.
Marka ay timaado qaadashada steroids, waxaa jira laba nooc oo dad ah; kuwa iibsanaya Nandrolone Decanoate ee iibinta iyo kuwa doorbiday gurigeeda ka soo jeeda Nandrolone Decanoate ceeriin. Isticmaalka labadaba, waxaa jira hal gool oo keliya; si ay u abuuraan muuqaal wanaagsan.
Haddii ay dhacdo in aad doorbido gurigaaga inaad nadiifiso steroid, markaa waa inaad ugu yaraan isku daydaa inaad samaysid hab sax ah. Adoo raacaya cunto kariska Nandrolone Decanoate oo la bixiyay sida loo sameeyo Deca, waxaad u badan tahay inaad hesho natiijooyin fiican. Bixinta ama isticmaalka qadar yar oo ka mid ah dareerayaasha ama Nandrolone Duufaan cad waxay saameyn kartaa tayada steroidkaaga.
Xaqiiqda, adigoo adeegsanaya qalabka saxda ah iyo maaddooyinka, waxaad si sahlan u diyaarsan kartaa Nandrolone Decanoate oo aad u garato kartidaada jirka.
Qalabka daawada loo isticmaalo ee loo isticmaalo lallabada postoperative iyo matag
Sidee loo Isticmaalaa Qorshaha Trenbololone si uu u qaso Trenbolone Enanthate budada 2019 10 Steroids Ugu Caansan ee Anabolic-ka ah Matoor